अदालतमै पुगेर शाहरुख खानका छोरा आर्यनले स्वीकार गर्दै यस्तो कुरा खुलाएपछि……. - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / अदालतमै पुगेर शाहरुख खानका छोरा आर्यनले स्वीकार गर्दै यस्तो कुरा खुलाएपछि…….
‘ड्र ग्स पार्टी’ आयोजना गरेको अभियोगमा गत हप्ता गि’रफ्ता’र बलिउड अभिनेता आर्यन खान अहिले जेलमा छन्। शुक्रबार उनको वकिलले धरौटीमा रिहा गर्न माग गरे पनि अदालतले अस्वीकार गर्दै आर्यनलाई जेल पठाएको हो। यसैबीच भारतको ला’गुऔ’ष’ध अनुसन्धान गर्ने निकाय एनसीबी केरकार गर्ने क्रममा उनले आफूले ला’गुऔ’ष’ध प्र’यो’ग गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार बयानका क्रममा आर्यनले भनेका छन्, ‘हो म च’रे’श पि’उँ’छु्, क्रु’ज पार्टीमा पनि च’रे’स लिनेवाला थिएँ।’ यो संगै छोरा आर्यन खान पक्राउ परेको असर अभिनेता शाहरुख खानको पेसामा पर्न थालेको छ। लर्निङ एप BYJU’S (बाइजुस) ले बलिउड अभिनेता शाहरुखका सबै विज्ञापनमा रोक लगाएको हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यति मात्र होइन, शाहरुखका प्रि–बुकिङ एड पनि रिलिज गरिरहेको छैन।
आर्यन पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा शाहरुखविरुद्ध ट्रोलिङ सुरु भएको थियो। मानिसले ती ब्रान्डसलाई पनि टारगेट गर्न थाले, जसको विज्ञापन शाहरुख गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा मानिसले बाइजुसलाई सोधिरहेका थिए– शाहरुख खानलाई ब्रान्ड एम्बेस्डर बनाइराखेर कम्पनीले के सन्देश दिइरहेको हो? अभिनेता शाहरुख आफ्ना छोरालाई यो सब सिकाउँछन्?